"စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်ချင်သူတိုင်း ကြည့်သင်တဲ့ရုပ်ရှင်ကား (၁၅) ကား"
စွန့်ဦးတီထွင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များနှင့် အောင်မြင်သူအများစုမှာ သူတို့ ကျွမ်းကျင်မှုများ၊ စွမ်းဆောင်ရည်များတိုးမြှင့်ဖို့ရာ အခွင့်အလမ်းများစွာရှိပါတယ်။
"လူငယ်နှင့် အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာ/အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်း (၅) ချက်"
ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့စစ်တမ်းအရ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကြည့်မယ် ဆိုရင် အရွယ်ရောက်ပြီးသားလူငယ်အရေ အတွက်ရဲ့(၇၃)သန်းပမာဏလောက်ဟာ အလုပ်လက်မဲ့ပြဿနာကို ရင်ဆိုင်နေရ တယ်လို့သိရပါတယ်။
ဒီအရေအတွက်က စာရင်းကောက်ယူနိုင်တဲ့နေရာ ဒေသတွေ မှာရှိတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပြီး ထိထိရောက် ရောက်စာရင်း မကောက်ယူနိုင်တဲ့နေရာ ဒေသတွေမှာရှိတဲ့အရေအတွက်တွေကို ခန့်မှန်းတွက်ချက်ပြီး ထပ်မံပေါင်းထည့် လိုက်မယ်ဆိုရင် ထွက်ပေါ်လာမယ့် အရေအတွက်က ဒီထက် ပိုမိုများပြားလာ နိုင်ပါတယ်။ ပညာသင်ယူနိုင်မှု၊လေ့ကျင့် သင်ကြားပေးမှုနဲ့ အလုပ်အကိုင် စတဲ့ ဘဝအသက်မွေးမှုအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးပါလိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့သူစိမ်း တစ်ရံဆံဆံဖြစ်နေတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ အရေအတွက်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်း အတာနဲ့ဆိုရင် သန်းပေါင်း(၆၂၀)လောက် အထိ ရှိနိုင်တယ်လို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်က ခန့်မှန်းထားပါတယ်။
ဒါ့အပြင် စစ်တမ်း တစ်ခုအရ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းမှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာရဲ့သန်း(၆ဝဝ) အရေအတွက်လောက်ရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာ အလုပ်တစ်ခုရဖို့အတွက် သူ့ထက်ငါအလု အယက်ဖြစ်လာသလို အဲဒီအထဲကမှ သန်း(၂ဝဝ)လောက်ကတော့ Professional အဖြစ် လုပ်ကိုင်ဖို့ရည်မှန်းထားတဲ့ အလုပ်အကိုင်နဲ့အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းပြုမှုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် စိတ်ရှည် သည်းခံစွာနဲ့စောင့်ဆိုင်း နေဖို့ပဲရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒါကိုမစောင့်နိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ရရာအလုပ်ကိုဝင်လုပ်မှပဲ အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ လူငယ် တွေအတော်များများဟာ မိမိတို့သွားချင်တဲ့ Professional လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေ သွေဖည်သွားကြပါတော့တယ်။
ဒီလိုမျိုးအရွယ်ရောက်ပြီးသား လူငယ်လေးတွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရတာ နိုင်ငံအတွက်လည်း များစွာနစ်နာရပါ တယ်။ ဘွဲ့ရပညာတတ်လူငယ်တွေကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ဖန်တီး မပေးနိုင်ဘူး၊ ဖန်တီးပေးထားတဲ့အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေကလည်း အခြေခံလစာကို ပညာရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ပမာဏမျိုးမရရှိနိုင် ဘူးဆိုရင် ဘွဲ့ရပညာ တတ်လူငယ်အတော် များများဟာ ဒီအခြေအနေတွေပြေလည် တဲ့တိုင်းတစ်ပါးနိုင်ငံတွေကို သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်လာပါ တယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ ပညာရှင်တွေရဲ့စွမ်းပကားကို ကိုယ့်နိုင်ငံက ပြန်လည်ခံစားခွင့်မရရှိတဲ့အတွက် အချိန် တွေကုန်သလောက် နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့လှမ်းတဲ့ ခြေလှမ်းတွေက ခရီးမရောက်တာကိုတွေ့ရ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ရပ်ဝေးမြေခြားကိုသွား ရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင်တဲ့သူတွေကိုလည်း အပြစ်တင်လို့မရပါဘူး။
မိမိတို့ရဲ့မိခင်နိုင်ငံ မှာကိုက ပညာရှင် ကို ပညာရှင်လိုသဘော မထားတတ်တဲ့ အလုပ်ရှင်တွေများစွာ ရှိလို့နေပါတယ်။ တိုင်းတစ်ပါးမှာလို မိခင် နိုင်ငံသားပညာရှင်တစ်ဦးအတွက် အနည်း ဆုံးပေးချေရမယ့် အခြေခံလစာပမာဏ သတ်မှတ်ချက်ဟာ အဲဒီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ ကုန် ဈေးနှုန်း၊အထွေထွေကုန်ကျ စရိတ်စတာ တွေနဲ့ သဟဇာတဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပမာဏ မျိုးမရှိပါဘူး။
အချို့အလုပ် ခေါ်တဲ့Post တွေမှာဆို လိုချင်တဲ့ဝန်ထမ်း ရဲ့အရည် အသွေးကိုကျတော့ စင်းလုံးချော Perfect နီးပါးတောင်းဆိုတတ်ကြပေမဲ့ ပေးဖို့ ဖော်ပြထားတဲ့လစာ ပမာဏက ခွက်ဈေး သာသာပါပဲ။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဝန်ထမ်းတွေ အပေါ်ကို ငဲ့ကြည့်ပေးတတ် တဲ့ကုမ္ပဏီ အချို့ပေါ် ထွက်လာတာ တွေ့ရပေမဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ ခြုံကြည့်ရင် ၂၅ရာခိုင်နှုန်းတောင် မပြည့် သေးပါဘူး။
လူငယ် တွေကိုအလုပ်လက်မဲ့ ဖြစ်စေတဲ့ အခြေခံကျတဲ့ အချက်တွေကို စဉ်းစားတဲ့အပိုင်းကို ဆက်သွားရအောင်ပါ။
Recommended For You >>> လူငယ်တွေအနေနဲ့ မိမိရဲ့အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းကို ကိုယ်တိုင် ဘယ်လိုထိုးဖောက်မလဲ?
လူငယ်များအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်း၏ အခြေခံအကြောင်းရင်း(၅) ချက်
လူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပွားရခြင်းအကြောင်းရင်း ထဲမှာ ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကြောင့် ဆိုတဲ့ အချက်ပါဝင်တယ်ဆိုပေမဲ့ ဒီအချက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာ ဝကွက် တည်မှီ နေတာမဟုတ်ဘဲ အလုပ်အကိုင် ဈေးကွက်၊ပညာရေးစနစ်နဲ့ အလုပ်သမား ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားမှုအခြေအနေ စတဲ့ အရာတွေပေါ်မှာလည်း တည်မှီနေပါ သေးတယ်။
ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုရဲ့ ဘဏ္ဍာ ရေးကပ်ဆိုက်မှုကတော့ အလုပ် လက်မဲ့ ပြဿနာကို ပိုမိုဆိုးရွားသွားစေပါတယ်။ဂရိနဲ့စပိန်နိုင်ငံတွေမှာတောင် ဘဏ္ဍာရေး ကပ်ဆိုက်ခဲ့တုန်းက လူငယ်တွေ အလုပ် လက်မဲ့ဖြစ်တဲ့ပမာဏဟာ နှစ်ဆကနေ သုံဆအထိမြင့်တက်သွားခဲ့ တာတွေ ရှိခဲ့ ပါတယ်။
ဒီလိုကပ်ဆိုက်တဲ့ ကာလတွေ ပြီးဆုံးသွားတာတောင်မှ လူငယ်တွေ အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှု ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်တာ မို့ ယာယီဝန်ထမ်း၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်၊ ဘယ်နှနှစ်လုပ်ပါမယ်ဆိုပြီး အတိအကျ စာချုပ်ချုပ်ဆိုထားခြင်းမရှိပေမဲ့ နေ့စား အလုပ်သမားလိုမျိုးအနေအထား တွေက နေ လူငယ်တွေဝင်ရောက်လုပ်ကိုင် နိုင်စေအောင် အစိုးရကစီမံဆောင်ရွက်ပေး ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ခံယူချက်ကိုက အလုပ် တစ်ခုရှိနေတယ် ဆိုရင်အနည်းဆုံးတော့ စိတ်မလေဘဲမိမိကိုယ်မိမိထိန်းသိမ်းနိုင်မယ် လို့ဆိုပါတယ်။ စိတ်မလေတာမို့ လူငယ် တွေအနေနဲ့ မကောင်းမှုဘက်ကို ခြေဦး လှည့်ဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် မိမိရဲ့ ချွေးနှဲစာနဲ့ရလာတဲ့ငွေကြေးဖြစ်တာမို့ လုပ်အားတန်ဖိုးချစ်မြတ်နိုးစိတ်၊ အချောင် ရချင် လိုချင်စိတ်တွေကို အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိတားဆီးနိုင်မယ်လို့လည်း မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။
(၂) လုပ်ငန်းရှင်တွေလိုချင်တာနဲ့ထပ်တူ မကျတာ
ဘွဲ့ရကျောင်းဆင်းကာစလူငယ်တွေ အားလုံးကတော့ လုပ်ငန်းပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံကျွမ်းကျင်မှု တစ်နည်းပြော ရရင်လက်တွေ့ပိုင်းကျွမ်းကျင်မှု အားနည်း ကြတာများပါတယ်။စာတွေ့အပိုင်းမှာ တော့ သူတို့ကျွမ်းကျင်ကောင်းကျွမ်းကျင် ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းရှင် တွေကတော့ စာတွေ့ထက် လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှုကိုပဲ ပိုမိုလိုချင်တတ်ကြပါ တယ်။ အဲဒီမှာပဲ ဘွဲ့ရကျောင်းဆင်းကာစ လူငယ်လေးတွေအနေနဲ့ အလုပ်ရဖို့ အခက်အခဲစပြီးကြုံရတော့တာပါပဲ။ဒီတော့ ဘွဲ့ရပြီးပေမဲ့ သင်တန်းတွေ ဆက်တက်ကြ တယ်။ ခေတ်ကာလနဲ့လျော်ညီစွာပေါ်ပြူ လာဖြစ်နေတဲ့အလုပ်တွေကို လျှောက်ဖို့ပြင် ဆင်လာကြပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ သင်ယူခဲ့တဲ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပညာ ရပ်နဲ့ တကယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်က ပြဒါး တစ်လမ်းသံတစ်လမ်းတွေ ဖြစ်ကုန်ပါ တော့တယ်။
အချို့အလုပ်ရှင်တွေကတော့်မနျ့နမ တွေခေါ်ယူအသုံးပြုပါတယ်။လက်တွေ့မှာလည်း အလုပ်တွေအများကြီး လုပ်စေတယ်။
အမှားအယွင်းအတိမ်း အစောင်းလေး ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဆူမယ် ငေါက်မယ် ကြိမ်းမောင်းမယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့ စီမံခန့်ခွဲရမယ့် အပိုင်းတွေမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားတယ်။ဆိုတော့ကာ ဝန်ထမ်း က ဟန်ပြအနေအထားသာဖြစ်ပြီး သူ့မှာ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တွေ၊လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ အပြည့် အဝမရှိပါဘူး။ဒီလိုလုပ်ငန်းရှင်မျိုးကိုလည်း မကြိုဆိုသင့်ပါဘူး။
(၃) ဘွဲ့ရတစ်ယောက်မှာရှိသင့်တဲ့အရည် အချင်းတွေမရှိတာ
ဘွဲ့ရကျောင်းဆင်းကာစ လူငယ်တွေ အနေနဲ့ မိမိမှာလုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံမရှိဘူးဆိုရင်လည်း ကျောင်းမှာ သင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး
တော့ဝမ်းစာတွေပြည့်ဝနေဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဟာ အလုပ်ရှင်ရဲ့အပြစ်မဟုတ်တော့ပဲ မိမိတို့ အပြစ်လို့ပဲမှတ်ယူထားလိုက်ဖို့ပြောချင် ပါတယ်။
ဒီလိုဖြစ်ရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကို ဆန်းစစ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ...................................
-ကျောင်းသားရဲ့ပင်ကိုဗီဇ ဒါမှမဟုတ် သင်ယူခဲ့ရတဲ့ပညာတွေကိုအလေးမထားဘဲ ပျော်ပါးမှုတွေနဲ့ကုန်လွန်ခဲ့တဲ့စိတ်
-နိုင်ငံရဲ့ ပညာရေးအဆင့်အတန်း ရယ်လို့ အချက်နှစ်ချက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။
ပထမတစ်ချက်ကတော့ ဘယ်သူမပြုမိမိမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတွက် ရှည်ရှည်ဝေးဝေးထပ်မပြောတော့ပါဘူး။ဒုတိယတစ်ချက်ကိုတော့ နည်းနည်းလေး ပြောချင်ပါတယ်။ပညာရေးဆိုတာ နိုင်ငံတစ်ခု ရဲ့အဓိကကျတဲ့မဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ် ပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ ဒါကို လက်လွတ်စပယ်သဘောမထားသင့်ပါဘူး။
မိမိတို့မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ဘွဲ့ရပညာ တတ်တွေဟာအမှန်တကယ် အရည် အချင်း ပြည့်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်သင့်ပါတယ်။ဒီလိုမှမဟုတ်ဘဲအရည်အသွေးကိုဦးစား မပေးဘဲအရေအတွက်ကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့ စနစ်ဆိုရင်တော့ ဘွဲ့ရပြီးလည်းသုံးစား မရတဲ့ သူတွေပဲဖြစ်နေပါလိမ့်မယ်။ဒါဟာ လူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ရခြင်းအတွက် အသံတိတ်လူသတ်သမားပါပဲ။
Recommended For You >>> "အလုပ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး လူငယ်တွေမှားယွင်းစွာ လက်ခံထားတဲ့ အယူအဆများ"
လူငယ်တွေအနေနဲ့ ဝန်ထမ်း အလုပ်မဟုတ်ပဲ မိမိတို့ကျွမ်းကျင်မှုရှိတဲ့ အသေး စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေ လုပ်ရင်းနဲ့လည်း အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြု နိုင်ကြပါသေးတယ်။ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ဆိုတော့ မိမိရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုပြင်းပြ ရင်ပြင်းပြသလောက် အကျိုးအမြတ်တွေက အနည်းအများရှိလာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအတွက် သူများလုပ်လို့လိုက်လုပ်တဲ့စီးပွားရေးမျိုးမဟုတ်ဘဲမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ဘာတွေအမှန် တကယ်လိုအပ်တာလဲဆိုတာကို မြင်အောင်ကြည့်တတ်ဖို့လိုပါတယ်။
လူငယ်တွေအတော်များ များရဲ့ စိတ်ထဲမှာက ငါ့မှာစိုက်ထုတ်နိုင်တဲ့အရင်း အနှီးမရှိဘဲ ဒီလိုကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလဲ၊ ထိုင်နေရင်အကောင်းသား- ကိုယ်ပိုင်စီးပွား ရေးလုပ်လိုက်လို့ အရှုံးပေါ်နေမှဒုက္ခပဲ ဆိုတဲ့ စိုးရိမ်စိတ်တွေထားရှိတတ်ကြ ပါတယ်။
မလုပ်ဘဲ ထိုင်စိုးရိမ်နေလို့ကတော့ အလကားပဲဖြစ်ပြီး ငွေကြေးမတတ်နိုင်ရင် အရင်းအနှီးအထောက်အပံ့ရမယ့် လမ်း ကြောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့၊ အရှုံးပေါ်မှာ ကြောက်ရင် လုပ်ငန်းကိုခပ်သေးသေးလေး ကနေပဲစတင်ပြီး စေတနာမှန်ကန်စွာ ကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်လာဖို့ စတဲ့အချက်တွေနဲ့ ချိန်ထိုး တွေးခေါ်ရပါလိမ့်မယ်။
မိမိအနေနဲ့ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးလေး တစ်ခုစတင်လုပ်ဆောင်တာနဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ကြီးထွားလာတဲ့အခါ ဝန်ထမ်း တွေထပ်မံ ခန့်အပ်ရဦးမှာမို့ ဒါဟာအလုပ်လက်မဲ့ ပြဿနာကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာကနေ ဖြေရှင်းပေးရာလည်းရောက်ပါတယ်။
လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်း မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကို အချိန်ရတိုင်းအကဲခတ်နေရင်း သူတို့တွေ ဆီကနည်းဗျူဟာတွေ၊ သူတို့ ရည်ရွယ် ထားတဲ့စိတ်ကူးတွေကို ဖြစ်နိုင်၊ မဖြစ်နိုင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ တတ်နိုင်သလောက် မြေတောင်မြှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
(၅) နည်းပညာတွေနဲ့ အလှမ်းဝေးနေ တာ
ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျပြီး စီးပွားရေး အရ ဝင်ငွေနည်းပါးကြတဲ့တိုင်းပြည်တွေမှာ လူထုနဲ့နည်းပညာအလှမ်းဝေးတဲ့ကိစ္စရပ်တွေများစွာရှိနေပါသေးတယ်။နောက်ဆုံး ပေါ်နည်းပညာတွေနဲ့ထိတွေ့ဖို့အသာ ထားဦး၊ အင်တာနက်ကိုတောင် ဘယ်လို အသုံးပြုရမယ်ဆိုတာနားမလည်သေးတဲ့ နေရာဒေသတွေ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံး အနေ အထားနဲ့ခြုံကြည့်ရင် များစွာရှိနေပါသေး တယ်။
လူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြား ပေးတဲ့ကျောင်းတွေမှာလည်း သင်ထောက် ကူပစ္စည်း တွေစုံလင်အောင်မရှိကြပါဘူး။ဒီတော့ ဒီဒေသမှာပညာသင်ရင်းကြီးပြင်း ခဲ့ရတဲ့ လူငယ်တွေဟာ အလုပ်အကိုင် ဈေးကွက်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ဝင်ဆံ့နိုင်မှာတဲ့ လဲ။
အထက်ပါအချက်တွေ ကတော့ လူငယ်တွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်မှုများပြား နေရခြင်းရဲ့ အခြေခံကျတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
- ဤWebsite တွင် ကျောင်းပညာအထောက်အကူပြုဘာသာ၊ နိုင်ငံခြားဘာသာ၊ ဂီတ၊ ကွန်ပျူတာ၊ ဒီဇိုင်းပညာ၊ အနုပညာ၊သက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုပညာစသည့်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုးကိုအနီးကပ်သင်ပြပေးသည့် ဆရာ/ဆရာမများကို လွယ်ကူ စွာရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
- ရှာဖွေရာတွင်လည်း မြို့အလိုက်၊ ဘာသာရပ်အလိုက် ရှာဖွေနိုင်သည့်အပြင် ဆရာ/ဆရာမများ၏ဖုန်းနံပါတ်များ၊ အီးမေးလ်လိပ်စာများ၊ သင်ကြားပေးသည့်ဘာသာရပ်အမျိုးမျိုး၊ အဆင့်အမျိုးမျိုးနှင့် အခကြေးငွေအမျိုးမျိုး တို့ကို လည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားပါသည်။
- ဝင်ရောက်ရှာဖွေလိုပါက ဤလင့်ခ် https://www.sayar.com.mm/subjects.html တွင် အခမဲ့ ဝင်ေ၇ာက်ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။
"လူငယျနှငျ့ အလုပျလကျမဲ့ပွဿနာ/အလုပျလကျမဲ့ဖွဈရခွငျး၏ အခွခေံအကွောငျးရငျး (၅) ခကျြ"
ကမ်ဘာ့ဘဏျရဲ့စဈတမျးအရ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ကွညျ့မယျ ဆိုရငျ အရှယျရောကျပွီးသားလူငယျအရေ အတှကျရဲ့(၇၃)သနျးပမာဏလောကျဟာ အလုပျလကျမဲ့ပွဿနာကို ရငျဆိုငျနရေ တယျလို့သိရပါတယျ။
ဒီအရအေတှကျက စာရငျးကောကျယူနိုငျတဲ့နရော ဒသေတှေ မှာရှိတဲ့ပမာဏသာဖွဈပွီး ထိထိရောကျ ရောကျစာရငျး မကောကျယူနိုငျတဲ့နရော ဒသေတှမှောရှိတဲ့အရအေတှကျတှကေို ခနျ့မှနျးတှကျခကျြပွီး ထပျမံပေါငျးထညျ့ လိုကျမယျဆိုရငျ ထှကျပျေါလာမယျ့ အရအေတှကျက ဒီထကျ ပိုမိုမြားပွားလာ နိုငျပါတယျ။ ပညာသငျယူနိုငျမှု၊လကေ့ငျြ့ သငျကွားပေးမှုနဲ့ အလုပျအကိုငျ စတဲ့ ဘဝအသကျမှေးမှုအတှကျ မရှိမဖွဈ အရေးပါလိုအပျတဲ့အရာတှနေဲ့သူစိမျး တဈရံဆံဆံဖွဈနတေဲ့လူငယျတှရေဲ့ အရအေတှကျဟာ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျး အတာနဲ့ဆိုရငျ သနျးပေါငျး(၆၂၀)လောကျ အထိ ရှိနိုငျတယျလို့ ကမ်ဘာ့ဘဏျက ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ စဈတမျး တဈခုအရ ဆယျစုနှဈတဈခုအတှငျးမှာ တဈကမ်ဘာလုံးအတိုငျးအတာရဲ့သနျး(၆ဝဝ) အရအေတှကျလောကျရှိတဲ့လူငယျတှဟော အလုပျတဈခုရဖို့အတှကျ သူ့ထကျငါအလု အယကျဖွဈလာသလို အဲဒီအထဲကမှ သနျး(၂ဝဝ)လောကျကတော့ Professional အဖွဈ လုပျကိုငျဖို့ရညျမှနျးထားတဲ့ အလုပျအကိုငျနဲ့အသကျမှေးဝမျး ကြောငျးပွုမှုလုပျခငျြတယျဆိုရငျ စိတျရှညျ သညျးခံစှာနဲ့စောငျ့ဆိုငျး နဖေို့ပဲရှိတယျလို့ သိရပါတယျ။ ဒါကိုမစောငျ့နိုငျဘူး ဆိုရငျတော့ ရရာအလုပျကိုဝငျလုပျမှပဲ အဆငျပွမှောဖွဈပါတယျ။ဒီလိုနဲ့ လူငယျ တှအေတျောမြားမြားဟာ မိမိတို့သှားခငျြတဲ့ Professional လမျးကွောငျးပျေါကနေ သှဖေညျသှားကွပါတော့တယျ။
ဒီလိုမြိုးအရှယျရောကျပွီးသား လူငယျလေးတှေ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈရတာ နိုငျငံအတှကျလညျး မြားစှာနဈနာရပါ တယျ။ ဘှဲ့ရပညာတတျလူငယျတှကေို အလုပျအကိုငျအခှငျ့အလမျးတှေ ဖနျတီး မပေးနိုငျဘူး၊ ဖနျတီးပေးထားတဲ့အလုပျ အကိုငျအခှငျ့အလမျးတှကေလညျး အခွခေံလစာကို ပညာရှငျတဈယောကျ အနနေဲ့ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ပမာဏမြိုးမရရှိနိုငျ ဘူးဆိုရငျ ဘှဲ့ရပညာ တတျလူငယျအတျော မြားမြားဟာ ဒီအခွအေနတှေပွေလေညျ တဲ့တိုငျးတဈပါးနိုငျငံတှကေို သှားရောကျ အလုပျလုပျကိုငျတာမြိုးတှဖွေဈပျေါလာပါ တယျ။
ကိုယျ့နိုငျငံကမှေးထုတျပေးလိုကျတဲ့ ပညာရှငျတှရေဲ့စှမျးပကားကို ကိုယျ့နိုငျငံက ပွနျလညျခံစားခှငျ့မရရှိတဲ့အတှကျ အခြိနျ တှကေုနျသလောကျ နိုငျငံတဈခုရဲ့လှမျးတဲ့ ခွလှေမျးတှကေ ခရီးမရောကျတာကိုတှရေ့ ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ရပျဝေးမွခွေားကိုသှား ရောကျအလုပျလုပျကိုငျတဲ့သူတှကေိုလညျး အပွဈတငျလို့မရပါဘူး။
မိမိတို့ရဲ့မိခငျနိုငျငံ မှာကိုက ပညာရှငျ ကို ပညာရှငျလိုသဘော မထားတတျတဲ့ အလုပျရှငျတှမြေားစှာ ရှိလို့နပေါတယျ။ တိုငျးတဈပါးမှာလို မိခငျ နိုငျငံသားပညာရှငျတဈဦးအတှကျ အနညျး ဆုံးပေးခရြေမယျ့ အခွခေံလစာပမာဏ သတျမှတျခကျြဟာ အဲဒီနိုငျငံမှာရှိတဲ့ ကုနျ ဈေးနှုနျး၊အထှထှေကေုနျကြ စရိတျစတာ တှနေဲ့ သဟဇာတဖွဈစနေိုငျတဲ့ ပမာဏ မြိုးမရှိပါဘူး။
အခြို့အလုပျ ချေါတဲ့Post တှမှောဆို လိုခငျြတဲ့ဝနျထမျး ရဲ့အရညျ အသှေးကိုကတြော့ စငျးလုံးခြော Perfect နီးပါးတောငျးဆိုတတျကွပမေဲ့ ပေးဖို့ ဖျောပွထားတဲ့လစာ ပမာဏက ခှကျဈေး သာသာပါပဲ။ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ ဝနျထမျးတှေ အပျေါကို ငဲ့ကွညျ့ပေးတတျ တဲ့ကုမ်ပဏီ အခြို့ပျေါ ထှကျလာတာ တှရေ့ပမေဲ့ တဈနိုငျငံလုံးအတိုငျးအတာနဲ့ ခွုံကွညျ့ရငျ ၂၅ရာခိုငျနှုနျးတောငျ မပွညျ့ သေးပါဘူး။
လူငယျ တှကေိုအလုပျလကျမဲ့ ဖွဈစတေဲ့ အခွခေံကတြဲ့ အခကျြတှကေို စဉျးစားတဲ့အပိုငျးကို ဆကျသှားရအောငျပါ။
Recommended For You >>> လူငယျတှအေနနေဲ့ မိမိရဲ့အောငျမွငျမှုလမျးကွောငျးကို ကိုယျတိုငျ ဘယျလိုထိုးဖောကျမလဲ?
လူငယျမြားအလုပျလကျမဲ့ဖွဈရခွငျး၏ အခွခေံအကွောငျးရငျး(၅) ခကျြ
လူငယျတှအေလုပျလကျမဲ့ ပွဿနာ ဖွဈပှားရခွငျးအကွောငျးရငျး ထဲမှာ ဘဏ်ဍာရေးအခွအေနကွေောငျ့ ဆိုတဲ့ အခကျြပါဝငျတယျဆိုပမေဲ့ ဒီအခကျြတဈခုတညျးပျေါမှာ ဝကှကျ တညျမှီ နတောမဟုတျဘဲ အလုပျအကိုငျ ဈေးကှကျ၊ပညာရေးစနဈနဲ့ အလုပျသမား ဥပဒပွေဋ်ဌာနျးထားမှုအခွအေနေ စတဲ့ အရာတှပေျေါမှာလညျး တညျမှီနပေါ သေးတယျ။
ဒါပမေဲ့ နိုငျငံတဈခုရဲ့ ဘဏ်ဍာ ရေးကပျဆိုကျမှုကတော့ အလုပျ လကျမဲ့ ပွဿနာကို ပိုမိုဆိုးရှားသှားစပေါတယျ။ဂရိနဲ့စပိနျနိုငျငံတှမှောတောငျ ဘဏ်ဍာရေး ကပျဆိုကျခဲ့တုနျးက လူငယျတှေ အလုပျ လကျမဲ့ဖွဈတဲ့ပမာဏဟာ နှဈဆကနေ သုံဆအထိမွငျ့တကျသှားခဲ့ တာတှေ ရှိခဲ့ ပါတယျ။
ဒီလိုကပျဆိုကျတဲ့ ကာလတှေ ပွီးဆုံးသှားတာတောငျမှ လူငယျတှေ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈမှု ကွီးထှားနဆေဲဖွဈတာ မို့ ယာယီဝနျထမျး၊ အခြိနျပိုငျးအလုပျ၊ ဘယျနှနှဈလုပျပါမယျဆိုပွီး အတိအကြ စာခြုပျခြုပျဆိုထားခွငျးမရှိပမေဲ့ နစေ့ား အလုပျသမားလိုမြိုးအနအေထား တှကေ နေ လူငယျတှဝေငျရောကျလုပျကိုငျ နိုငျစအေောငျ အစိုးရကစီမံဆောငျရှကျပေး ခဲ့ပါတယျ။
သူတို့ရဲ့ခံယူခကျြကိုက အလုပျ တဈခုရှိနတေယျ ဆိုရငျအနညျးဆုံးတော့ စိတျမလဘေဲမိမိကိုယျမိမိထိနျးသိမျးနိုငျမယျ လို့ဆိုပါတယျ။ စိတျမလတောမို့ လူငယျ တှအေနနေဲ့ မကောငျးမှုဘကျကို ခွဦေး လှညျ့ဖွဈတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ ဒါ့အပွငျ မိမိရဲ့ ခြှေးနှဲစာနဲ့ရလာတဲ့ငှကွေေးဖွဈတာမို့ လုပျအားတနျဖိုးခဈြမွတျနိုးစိတျ၊ အခြောငျ ရခငျြ လိုခငျြစိတျတှကေို အတိုငျးအတာ တဈခုအထိတားဆီးနိုငျမယျလို့လညျး မြှျောလငျ့ထားကွပါတယျ။
(၂) လုပျငနျးရှငျတှလေိုခငျြတာနဲ့ထပျတူ မကတြာ
ဘှဲ့ရကြောငျးဆငျးကာစလူငယျတှေ အားလုံးကတော့ လုပျငနျးပိုငျးဆိုငျရာ အတှအေ့ကွုံကြှမျးကငျြမှု တဈနညျးပွော ရရငျလကျတှပေို့ငျးကြှမျးကငျြမှု အားနညျး ကွတာမြားပါတယျ။စာတှအေ့ပိုငျးမှာ တော့ သူတို့ကြှမျးကငျြကောငျးကြှမျးကငျြ ကွမှာဖွဈပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လုပျငနျးရှငျ တှကေတော့ စာတှထေ့ကျ လကျတှေ့ ကြှမျးကငျြမှုကိုပဲ ပိုမိုလိုခငျြတတျကွပါ တယျ။ အဲဒီမှာပဲ ဘှဲ့ရကြောငျးဆငျးကာစ လူငယျလေးတှအေနနေဲ့ အလုပျရဖို့ အခကျအခဲစပွီးကွုံရတော့တာပါပဲ။ဒီတော့ ဘှဲ့ရပွီးပမေဲ့ သငျတနျးတှေ ဆကျတကျကွ တယျ။ ခတျေကာလနဲ့လြျောညီစှာပျေါပွူ လာဖွဈနတေဲ့အလုပျတှကေို လြှောကျဖို့ပွငျ ဆငျလာကွပါတော့တယျ။
ဒီလိုနဲ့ သူတို့ သငျယူခဲ့တဲ့အသကျမှေးဝမျးကြောငျးပညာ ရပျနဲ့ တကယျလုပျနရေတဲ့ အလုပျက ပွဒါး တဈလမျးသံတဈလမျးတှေ ဖွဈကုနျပါ တော့တယျ။
အခြို့အလုပျရှငျတှကေတေျာ့မနြ့နမ တှခေျေါယူအသုံးပွုပါတယျ။လကျတှမှေ့ာလညျး အလုပျတှအေမြားကွီး လုပျစတေယျ။
အမှားအယှငျးအတိမျး အစောငျးလေး ဖွဈလာခဲ့ရငျ ဆူမယျ ငေါကျမယျ ကွိမျးမောငျးမယျ။ ဒါပမေဲ့ ဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့တှနေဲ့ စီမံခနျ့ခှဲရမယျ့ အပိုငျးတှမှော ကနျ့သတျခကျြတှနေဲ့ ထိနျးခြုပျထားတယျ။ဆိုတော့ကာ ဝနျထမျး က ဟနျပွအနအေထားသာဖွဈပွီး သူ့မှာ ဆုံးဖွတျပိုငျခှငျ့တှေ၊လုပျပိုငျခှငျ့တှေ အပွညျ့ အဝမရှိပါဘူး။ဒီလိုလုပျငနျးရှငျမြိုးကိုလညျး မကွိုဆိုသငျ့ပါဘူး။
(၃) ဘှဲ့ရတဈယောကျမှာရှိသငျ့တဲ့အရညျ အခငျြးတှမေရှိတာ
ဘှဲ့ရကြောငျးဆငျးကာစ လူငယျတှေ အနနေဲ့ မိမိမှာလုပျငနျးအတှေ့ အကွုံမရှိဘူးဆိုရငျလညျး ကြောငျးမှာ သငျယူခဲ့ရတဲ့ပညာရပျတှနေဲ့ပတျသကျပွီး
တော့ဝမျးစာတှပွေညျ့ဝနဖေို့လိုပါတယျ။ဒီလိုမြိုးမဟုတျဘူးဆိုရငျတော့ဒါဟာ အလုပျရှငျရဲ့အပွဈမဟုတျတော့ပဲ မိမိတို့ အပွဈလို့ပဲမှတျယူထားလိုကျဖို့ပွောခငျြ ပါတယျ။
ဒီလိုဖွဈရခွငျးရဲ့အကွောငျးရငျးကို ဆနျးစဈကွညျ့မယျဆိုရငျ ...................................
-ကြောငျးသားရဲ့ပငျကိုဗီဇ ဒါမှမဟုတျ သငျယူခဲ့ရတဲ့ပညာတှကေိုအလေးမထားဘဲ ပြျောပါးမှုတှနေဲ့ကုနျလှနျခဲ့တဲ့စိတျ
-နိုငျငံရဲ့ ပညာရေးအဆငျ့အတနျး ရယျလို့ အခကျြနှဈခကျြကိုတှရေ့ပါတယျ။
ပထမတဈခကျြကတော့ ဘယျသူမပွုမိမိမှုပဲဖွဈပါတယျ။ဒီအတှကျ ရှညျရှညျဝေးဝေးထပျမပွောတော့ပါဘူး။ဒုတိယတဈခကျြကိုတော့ နညျးနညျးလေး ပွောခငျြပါတယျ။ပညာရေးဆိုတာ နိုငျငံတဈခု ရဲ့အဓိကကတြဲ့မဏ်ဍိုငျတဈခုဖွဈ ပါတယျ။တာဝနျရှိသူတှအေနနေဲ့ ဒါကို လကျလှတျစပယျသဘောမထားသငျ့ပါဘူး။
မိမိတို့မှေးထုတျပေးလိုကျတဲ့ဘှဲ့ရပညာ တတျတှဟောအမှနျတကယျ အရညျ အခငျြး ပွညျ့ဝတဲ့သူတှဖွေဈသငျ့ပါတယျ။ဒီလိုမှမဟုတျဘဲအရညျအသှေးကိုဦးစား မပေးဘဲအရအေတှကျကိုပဲ ဦးစားပေးတဲ့ စနဈဆိုရငျတော့ ဘှဲ့ရပွီးလညျးသုံးစား မရတဲ့ သူတှပေဲဖွဈနပေါလိမျ့မယျ။ဒါဟာ လူငယျတှအေလုပျလကျမဲ့ဖွဈရခွငျးအတှကျ အသံတိတျလူသတျသမားပါပဲ။
Recommended For You >>> "အလုပျနဲ့ပတျသတျပွီး လူငယျတှမှေားယှငျးစှာ လကျခံထားတဲ့ အယူအဆမြား"
လူငယျတှအေနနေဲ့ ဝနျထမျး အလုပျမဟုတျပဲ မိမိတို့ကြှမျးကငျြမှုရှိတဲ့ အသေး စားစီးပှားရေးလုပျငနျးလေးတှေ လုပျရငျးနဲ့လညျး အသကျမှေးဝမျးကြောငျး ပွု နိုငျကွပါသေးတယျ။ ကိုယျပိုငျလုပျငနျး ဆိုတော့ မိမိရဲ့ကွိုးစားအားထုတျမှုပွငျးပွ ရငျပွငျးပွသလောကျ အကြိုးအမွတျတှကေ အနညျးအမြားရှိလာနိုငျပါတယျ။
ဒီအတှကျ သူမြားလုပျလို့လိုကျလုပျတဲ့စီးပှားရေးမြိုးမဟုတျဘဲမိမိရဲ့ပတျဝနျးကငျြမှာ ဘာတှအေမှနျ တကယျလိုအပျတာလဲဆိုတာကို မွငျအောငျကွညျ့တတျဖို့လိုပါတယျ။
လူငယျတှအေတျောမြား မြားရဲ့ စိတျထဲမှာက ငါ့မှာစိုကျထုတျနိုငျတဲ့အရငျး အနှီးမရှိဘဲ ဒီလိုကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးလုပျဖို့ ဘယျလိုလုပျဖွဈနိုငျပါ့မလဲ၊ ထိုငျနရေငျအကောငျးသား- ကိုယျပိုငျစီးပှား ရေးလုပျလိုကျလို့ အရှုံးပျေါနမှေဒုက်ခပဲ ဆိုတဲ့ စိုးရိမျစိတျတှထေားရှိတတျကွ ပါတယျ။
မလုပျဘဲ ထိုငျစိုးရိမျနလေို့ကတော့ အလကားပဲဖွဈပွီး ငှကွေေးမတတျနိုငျရငျ အရငျးအနှီးအထောကျအပံ့ရမယျ့ လမျး ကွောငျးတှကေိုရှာဖှဖေို့၊ အရှုံးပျေါမှာ ကွောကျရငျ လုပျငနျးကိုခပျသေးသေးလေး ကနပေဲစတငျပွီး စတေနာမှနျကနျစှာ ကွိုးစားလုပျကိုငျရငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ လုပျငနျးခြဲ့ထှငျလာဖို့ စတဲ့အခကျြတှနေဲ့ ခြိနျထိုး တှေးချေါရပါလိမျ့မယျ။
မိမိအနနေဲ့ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျငနျးအသေးလေး တဈခုစတငျလုပျဆောငျတာနဲ့ လုပျငနျးတှေ ကွီးထှားလာတဲ့အခါ ဝနျထမျး တှထေပျမံ ခနျ့အပျရဦးမှာမို့ ဒါဟာအလုပျလကျမဲ့ ပွဿနာကို တဈထောငျ့တဈနရောကနေ ဖွရှေငျးပေးရာလညျးရောကျပါတယျ။
လုပျငနျးရှငျတှအေနနေဲ့လညျး မိမိတို့ပတျဝနျးကငျြမှာရှိတဲ့လူငယျတှကေို အခြိနျရတိုငျးအကဲခတျနရေငျး သူတို့တှေ ဆီကနညျးဗြူဟာတှေ၊ သူတို့ ရညျရှယျ ထားတဲ့စိတျကူးတှကေို ဖွဈနိုငျ၊ မဖွဈနိုငျ ထညျ့သှငျးစဉျးစားကာ တတျနိုငျသလောကျ မွတေောငျမွှောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
(၅) နညျးပညာတှနေဲ့ အလှမျးဝေးနေ တာ
ဖှံ့ဖွိုးမှုနောကျကပြွီး စီးပှားရေး အရ ဝငျငှနေညျးပါးကွတဲ့တိုငျးပွညျတှမှော လူထုနဲ့နညျးပညာအလှမျးဝေးတဲ့ကိစ်စရပျတှမြေားစှာရှိနပေါသေးတယျ။နောကျဆုံး ပျေါနညျးပညာတှနေဲ့ထိတှဖေို့အသာ ထားဦး၊ အငျတာနကျကိုတောငျ ဘယျလို အသုံးပွုရမယျဆိုတာနားမလညျသေးတဲ့ နရောဒသေတှေ ကမ်ဘာတဈဝနျးလုံး အနေ အထားနဲ့ခွုံကွညျ့ရငျ မြားစှာရှိနပေါသေး တယျ။
လူငယျတှကေိုပညာသငျကွား ပေးတဲ့ကြောငျးတှမှောလညျး သငျထောကျ ကူပစ်စညျး တှစေုံလငျအောငျမရှိကွပါဘူး။ဒီတော့ ဒီဒသေမှာပညာသငျရငျးကွီးပွငျး ခဲ့ရတဲ့ လူငယျတှဟော အလုပျအကိုငျ ဈေးကှကျမှာ ဘယျလိုလုပျဝငျဆံ့နိုငျမှာတဲ့ လဲ။
အထကျပါအခကျြတှေ ကတော့ လူငယျတှအေလုပျလကျမဲ့ဖွဈမှုမြားပွား နရေခွငျးရဲ့ အခွခေံကတြဲ့အကွောငျးအရာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
- ဤWebsite တှငျ ကြောငျးပညာအထောကျအကူပွုဘာသာ၊ နိုငျငံခွားဘာသာ၊ ဂီတ၊ ကှနျပြူတာ၊ ဒီဇိုငျးပညာ၊ အနုပညာ၊သကျမှေးဝမျးကြောငျးမှုပညာစသညျ့ဘာသာရပျအမြိုးမြိုးကိုအနီးကပျသငျပွပေးသညျ့ ဆရာ/ဆရာမမြားကို လှယျကူ စှာရှာဖှနေိုငျပါသညျ။
- ရှာဖှရောတှငျလညျး မွို့အလိုကျ၊ ဘာသာရပျအလိုကျ ရှာဖှနေိုငျသညျ့အပွငျ ဆရာ/ဆရာမမြား၏ဖုနျးနံပါတျမြား၊ အီးမေးလျလိပျစာမြား၊ သငျကွားပေးသညျ့ဘာသာရပျအမြိုးမြိုး၊ အဆငျ့အမြိုးမြိုးနှငျ့ အခကွေးငှအေမြိုးမြိုး တို့ကို လညျး ထညျ့သှငျးဖျောပွပေးထားပါသညျ။
- ဝငျရောကျရှာဖှလေိုပါက ဤလငျ့ချ https://www.sayar.com.mm/subjects.html တှငျ အခမဲ့ ဝငျရောကျရှာဖှနေိုငျပါသညျ။
Thursday, 07 November 2019 15:58
"အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါ လုံးဝမလုပ်သင့်တဲ့ အမှားကြီး (၅) ချက်"
ပထမဆုံး အလုပ်ခွင်ဝင်ကြမယ့်သူတွေအနေနဲ့ အင်တာဗျူးဖြေတဲ့အခါ သိထားသင့်တဲ့ အခြေခံအချက်လေးတွေကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Wednesday, 30 October 2019 16:29
သင့်ဘဝမှာ အငြင်းခံဖူးမှာနော်။ အလုပ်သွားလျှောက်တဲ့အခါ အပယ်ခံရတာ၊ ချစ်သူကို ချစ်စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ အငြင်းခံရတာ၊ စကော်လားရှစ်အတွက် အပယ်ခံလိုက်ရတာ၊
ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲဖြေလိုက်တာ သင်အပယ်ခံလိုက်ရတာ စသည်ဖြင့်ပေါ့။
အဲလိုအငြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ သင့်စိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်ရသလို၊ စိတ်ဓာတ်လဲကျသွားတာမျိုးဖြစ်ဖူးမှာပါနော်။
ဒါပေမယ့် အဲလိုမျိုး အငြင်းခံလိုက်ရတိုင်း သင့်ဘဝမှာ တစ်ဘဝလုံးစာ အငြင်းခံလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီ့အခိုက်အတန့်လေးပဲ အငြင်းခံလိုက်ရတာပါ။ အငြင်းခံလိုက်ရပေမယ့် အောင်မြင်ခဲ့သူတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အငြင်းခံလိုက်ရတာကနေ အောင်မြင်အောင်လုပ်ယူလို့ ရတယ်ဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
(၁) သင်ဟာ လုံးဝညံ့ဖျင်းနေတယ်ဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျောက်ပစ်ပါ။
အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့ခဏမှာ သင့်ကိုသင် ဟိုးအောက်ဆုံးထိရောက်သွားသလိုမျိုး ခံစားဖူးတယ်မလား။
အဲဒါအပြင် အဲဒီ့အခိုက်အတန့်မှာ သင့်ရဲ့အဖျက်သဘောအတွေးတွေနဲ့ သင်ချောင်ပိတ်မိနေမှာပါ။
“ငါက အသုံးမကျလို့လား…..၊ ငါက ဘယ်နေရာမှာမှ အသုံးမဝင်ဘူးလား၊ ငါက တော်တော်သနားစရာကောင်းနေပါလား၊
ငါရှက်လိုက်တာ” စတဲ့အတွေးတွေက သင့်ကိုပိုပြီး အောက်ကိုဆွဲချနေပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကြောင့် သင့်ကိုသင် လုံးဝညံ့ဖျင်းတယ်လို့ထင်နေတဲ့အတွေးကို ဖျောက်ပစ်ပါ။
အငြင်းခံရတာကို လူတိုင်းကြုံဖူးပါတယ်နော်။ ဘယ်သူမှ အခါခါမကြိုးစားခဲ့ဘဲ နေရာတစ်နေရာကို မရလာပါဘူး။
အဲဒီ့အတွက် သင်မှ ညံ့ဖျင်းလွန်းလို့ အငြင်းခံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို နားလည်ပါ။ တကယ်တော့ အငြင်းခံရတယ်ဆိုတာ အဲဒီ့အခိုက်အတန့်လေးမှာပဲ အငြင်းခံရတာပါ။ အဲဒီ့အခိုက်အတန့်ကျော်သွားတဲ့နောက်ထပ် အခိုက်အတန့်တွေမှာ အငြင်းခံရချင်မှ ခံရမှာပါ။
(၂) ဘယ်အရာကမှ ချက်ချင်းအောင်မြင်သွားတာမရှိပါဘူး။
သင်အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ ပြုံးပြီး “ဘယ်အရာကမှ ချက်ချင်းအောင်မြင်သွားတယ်ဆိုတာမရှိပါဘူး…..” လို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ကြားအောင်ပြောလိုက်ပါ။
အငြင်းခံလိုက်ရတယ်ဆိုတာ စိန်ခေါ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ ဒီနေရာမှာပဲ သင်လက်လျော့လိုက်တော့မလား၊
နောက်တစ်ခါ စိတ်လိုလက်ရ အောင်မြင်အောင် လုပ်မလား။ အဲဒါသင့်အပေါ်မူတည်တာပါ။ သင်အောင်မြင်ချင်ရင် လက်မလျော့နဲ့ပေါ့၊ အဖြေကရှင်းပါတယ်။
သင်လက်မလျော့သေးမချင်း အောင်မြင်မှုကို သင်နဲ့နီးကပ်လာပါလိမ့်မယ်။
(၃) ကွဲပြားခြားနားမှုကြောင့်ဆိုတာကို လက်ခံပါ။
အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ သင်အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ သင်ညံ့လို့မဟုတ်ပါဘူး၊ သူတို့လိုချင်တာနဲ့ သင်မှာရှိတဲ့အရည်အချင်းနဲ့က မအပ်စပ်သေးလို့ဖြစ်မှာပါ။
သင့်ရေးထားတဲ့ ဝတ္ထုတစ်ပုဒ်ကို ငြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ သင်ဆိုလိုချင်တာနဲ့ သူတို့ဆိုလိုချင်တာ ကွဲပြားနေလို့ဖြစ်မှာပါ။
အမြင်တူခြင်းဆိုရင်တော့ သင့်ရဲ့ဝတ္ထုကို လက်ခံချင်လက်ခံမှာပေါ့။ အဲလိုပဲ သင့်ရဲ့အရည်အချင်းနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ အလုပ်အင်တာဗျူးမှာ သင်အငြင်းခံရတော့မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်။
အဓိကက မတူကွဲပြားမှုတွေရှိတယ်ဆိုတာကို သင်လက်ခံထားပြီး အခွင့်အရေးတွေကို တွေ့အောင်လိုက်ရှာနေဖို့ပါပဲ။
Recommended For You >>>> "အသက် ၂၀ ကျော်လာရင် သင့်အနေနဲ့မဖြစ်မနေ စွန့် လွှတ်လိုက်သင့်တဲ့ အရာ (၉) ခု"
(၄) အငြင်းခံရတာ အောင်မြင်ဖို့ပါ။
အငြင်းခံလိုက်ရတာနဲ့ ဘယ်တော့မှ မအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့တွေးနေရင် သင့်အတွေးကိုပြောင်းပစ်လိုက်ပါ။ တကယ်တော့ အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ သင်အောင်မြင်ဖို့ပါ။
အငြင်းခံရတဲ့နောက် သင့်ကိုသင်ပိုကောင်းအောင် ဒီထက်ကြိုးစားလိုက်ပါ။ အရည်အချင်းကို ဒီထက်ပြည့်ဝဖို့ လုပ်ပေါ့။
သင့်ကဗျာကို ဒီတစ်ယောက်ကလက်မခံရင် လက်ခံမယ့်သူဆီအရောက်ပို့ပေ့ါ။ သင့်ပရောဂျက်ကို အားလုံးက ငြင်းပယ်နေရင်
ဒီထက်ကောင်းတဲ့ပရောဂျက်ထပ်ဆွဲပေါ့။ အဲဒါကြောင့် အငြင်းခံရတာက သင့်ကို ပိုပြီး အောင်မြင်စေနိုင်ပါတယ်။
အောင်မြင်မှုအတွက် အဓိကလိုအပ်ချက်က သင်လက်လျော့အရှုံးမပေးဖို့ပါပဲ။ တစ်ခါအငြင်းခံရတိုင်း သင်တခါထပ်ကြိုးစားပေါ့။
ကျရှုံးတိုင်းအရှုံးပေးရင်တော့ အောင်မြင်တဲ့သူဆိုတာတောင် ရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပေါ်မှာ ပြောခဲ့သလိုပဲ တခါ ရှုံးရင် နောက်တခါ ဘယ်လိုအနိုင်ယူမလဲစဉ်းစားပြီး ပြန်ကြိုးစားပါ။
တခါငြင်းရင် နောက်တခါ မငြင်းခံရအောင် ဘာတွေပြင်ဆင်မလဲစဉ်းစားပါ။ အဓိကက အရှုံးမပေးဖို့ပါပဲနော်။
အငြင်းခံလိုက်ရရုံနဲ့ မအောင်မြင်နိုင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်လျော့လိုက်တာကမှ မအောင်မြင်နိုင်ခြင်းရဲ့ တရားခံအစစ်ပါ။ အငြင်းခံလိုက်ရတဲ့အခါ ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အားတင်းရင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြန်အားပေးလိုက်ပါနော်။
သငျ့ဘဝမှာ အငွငျးခံဖူးမှာနျော။ အလုပျသှားလြှောကျတဲ့အခါ အပယျခံရတာ၊ ခဈြသူကို ခဈြစကားပွောတဲ့အခြိနျမှာ အငွငျးခံရတာ၊ စကျောလားရှဈအတှကျ အပယျခံလိုကျရတာ၊
ဝငျခှငျ့စာမေးပှဲဖွလေိုကျတာ သငျအပယျခံလိုကျရတာ စသညျဖွငျ့ပေါ့။
အဲလိုအငွငျးခံလိုကျရတဲ့အခါ သငျ့စိတျထဲမှာတျောတျောလေးတော့ စိတျမကောငျးဖွဈရသလို၊ စိတျဓာတျလဲကသြှားတာမြိုးဖွဈဖူးမှာပါနျော။
ဒါပမေယျ့ အဲလိုမြိုး အငွငျးခံလိုကျရတိုငျး သငျ့ဘဝမှာ တဈဘဝလုံးစာ အငွငျးခံလိုကျရတာမြိုးမဟုတျပါဘူး။
အဲဒီ့အခိုကျအတနျ့လေးပဲ အငွငျးခံလိုကျရတာပါ။ အငွငျးခံလိုကျရပမေယျ့ အောငျမွငျခဲ့သူတှအေမြားကွီးရှိပါတယျ။ အငွငျးခံလိုကျရတာကနေ အောငျမွငျအောငျလုပျယူလို့ ရတယျဆိုတာကို ပွောပွပေးခငျြပါတယျ။
(၁) သငျဟာ လုံးဝညံ့ဖငျြးနတေယျဆိုတဲ့အတှေးကိုဖြောကျပဈပါ။
အငွငျးခံလိုကျရတဲ့ခဏမှာ သငျ့ကိုသငျ ဟိုးအောကျဆုံးထိရောကျသှားသလိုမြိုး ခံစားဖူးတယျမလား။
အဲဒါအပွငျ အဲဒီ့အခိုကျအတနျ့မှာ သငျ့ရဲ့အဖကျြသဘောအတှေးတှနေဲ့ သငျခြောငျပိတျမိနမှောပါ။
“ငါက အသုံးမကလြို့လား…..၊ ငါက ဘယျနရောမှာမှ အသုံးမဝငျဘူးလား၊ ငါက တျောတျောသနားစရာကောငျးနပေါလား၊
ငါရှကျလိုကျတာ” စတဲ့အတှေးတှကေ သငျ့ကိုပိုပွီး အောကျကိုဆှဲခနြပေါလိမျ့မယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သငျ့ကိုသငျ လုံးဝညံ့ဖငျြးတယျလို့ထငျနတေဲ့အတှေးကို ဖြောကျပဈပါ။
အငွငျးခံရတာကို လူတိုငျးကွုံဖူးပါတယျနျော။ ဘယျသူမှ အခါခါမကွိုးစားခဲ့ဘဲ နရောတဈနရောကို မရလာပါဘူး။
အဲဒီ့အတှကျ သငျမှ ညံ့ဖငျြးလှနျးလို့ အငွငျးခံရတာမဟုတျဘူးဆိုတာကို နားလညျပါ။ တကယျတော့ အငွငျးခံရတယျဆိုတာ အဲဒီ့အခိုကျအတနျ့လေးမှာပဲ အငွငျးခံရတာပါ။ အဲဒီ့အခိုကျအတနျ့ကြျောသှားတဲ့နောကျထပျ အခိုကျအတနျ့တှမှော အငွငျးခံရခငျြမှ ခံရမှာပါ။
(၂) ဘယျအရာကမှ ခကျြခငျြးအောငျမွငျသှားတာမရှိပါဘူး။
သငျအငွငျးခံလိုကျရတဲ့အခါ ပွုံးပွီး “ဘယျအရာကမှ ခကျြခငျြးအောငျမွငျသှားတယျဆိုတာမရှိပါဘူး…..” လို့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ကွားအောငျပွောလိုကျပါ။
အငွငျးခံလိုကျရတယျဆိုတာ စိနျချေါလိုကျခွငျးပါပဲ။ ဒီနရောမှာပဲ သငျလကျလြော့လိုကျတော့မလား၊
နောကျတဈခါ စိတျလိုလကျရ အောငျမွငျအောငျ လုပျမလား။ အဲဒါသငျ့အပျေါမူတညျတာပါ။ သငျအောငျမွငျခငျြရငျ လကျမလြော့နဲ့ပေါ့၊ အဖွကေရှငျးပါတယျ။
သငျလကျမလြော့သေးမခငျြး အောငျမွငျမှုကို သငျနဲ့နီးကပျလာပါလိမျ့မယျ။
(၃) ကှဲပွားခွားနားမှုကွောငျ့ဆိုတာကို လကျခံပါ။
အလုပျအငျတာဗြူးမှာ သငျအငွငျးခံလိုကျရတဲ့အခါ သငျညံ့လို့မဟုတျပါဘူး၊ သူတို့လိုခငျြတာနဲ့ သငျမှာရှိတဲ့အရညျအခငျြးနဲ့က မအပျစပျသေးလို့ဖွဈမှာပါ။
သငျ့ရေးထားတဲ့ ဝတ်ထုတဈပုဒျကို ငွငျးခံလိုကျရတဲ့အခါ သငျဆိုလိုခငျြတာနဲ့ သူတို့ဆိုလိုခငျြတာ ကှဲပွားနလေို့ဖွဈမှာပါ။
အမွငျတူခွငျးဆိုရငျတော့ သငျ့ရဲ့ဝတ်ထုကို လကျခံခငျြလကျခံမှာပေါ့။ အဲလိုပဲ သငျ့ရဲ့အရညျအခငျြးနဲ့ကိုကျညီတဲ့ အလုပျအငျတာဗြူးမှာ သငျအငွငျးခံရတော့မှာ မဟုတျပါဘူးနျော။
အဓိကက မတူကှဲပွားမှုတှရှေိတယျဆိုတာကို သငျလကျခံထားပွီး အခှငျ့အရေးတှကေို တှအေ့ောငျလိုကျရှာနဖေို့ပါပဲ။
Recommended For You >>>> "အသကျ ၂၀ ကြျောလာရငျ သငျ့အနနေဲ့ မဖွဈမနေ စှနျ့လှတျလိုကျသငျ့တဲ့ အရာ (၉) ခု"
(၄) အငွငျးခံရတာ အောငျမွငျဖို့ပါ။
အငွငျးခံလိုကျရတာနဲ့ ဘယျတော့မှ မအောငျမွငျနိုငျဘူးလို့တှေးနရေငျ သငျ့အတှေးကိုပွောငျးပဈလိုကျပါ။ တကယျတော့ အငွငျးခံလိုကျရတဲ့အခါ သငျအောငျမွငျဖို့ပါ။
အငွငျးခံရတဲ့နောကျ သငျ့ကိုသငျပိုကောငျးအောငျ ဒီထကျကွိုးစားလိုကျပါ။ အရညျအခငျြးကို ဒီထကျပွညျ့ဝဖို့ လုပျပေါ့။
သငျ့ကဗြာကို ဒီတဈယောကျကလကျမခံရငျ လကျခံမယျ့သူဆီအရောကျပို့ပေ့ါ။ သငျ့ပရောဂကျြကို အားလုံးက ငွငျးပယျနရေငျ
ဒီထကျကောငျးတဲ့ပရောဂကျြထပျဆှဲပေါ့။ အဲဒါကွောငျ့ အငွငျးခံရတာက သငျ့ကို ပိုပွီး အောငျမွငျစနေိုငျပါတယျ။
အောငျမွငျမှုအတှကျ အဓိကလိုအပျခကျြက သငျလကျလြော့အရှုံးမပေးဖို့ပါပဲ။ တဈခါအငွငျးခံရတိုငျး သငျတခါထပျကွိုးစားပေါ့။
ကရြှုံးတိုငျးအရှုံးပေးရငျတော့ အောငျမွငျတဲ့သူဆိုတာတောငျ ရှိတော့မှာမဟုတျပါဘူး။ အပျေါမှာ ပွောခဲ့သလိုပဲ တခါ ရှုံးရငျ နောကျတခါ ဘယျလိုအနိုငျယူမလဲစဉျးစားပွီး ပွနျကွိုးစားပါ။
တခါငွငျးရငျ နောကျတခါ မငွငျးခံရအောငျ ဘာတှပွေငျဆငျမလဲစဉျးစားပါ။ အဓိကက အရှုံးမပေးဖို့ပါပဲနျော။
အငွငျးခံလိုကျရရုံနဲ့ မအောငျမွငျနိုငျတာမဟုတျပါဘူး။ လကျလြော့လိုကျတာကမှ မအောငျမွငျနိုငျခွငျးရဲ့ တရားခံအစဈပါ။ အငွငျးခံလိုကျရတဲ့အခါ ဒီစာလေးဖတျပွီး အားတငျးရငျး ကိုယျ့ကိုကိုယျ ပွနျအားပေးလိုကျပါနျော။
Thursday, 24 October 2019 15:42
"အတနျးပညာ မရှိပမေဲ့ ဘာလို့ သူတို့ (၃) ဦးက တဈလမှာ ဝငျငှေ ကပျြ (၅၇) သိနျးရနရေတာလဲ"
Monday, 21 October 2019 16:44
Saturday, 19 October 2019 14:03
"ထူးချွန်ထက်မြက် သူတိုင်း ကြုံရတတ်တဲ့ လူမသိသူမသိ အခက်အခဲ(၅)မျိုး"
တော်တဲ့ထက်တဲ့သူတွေက သိတာတွေလည်းအရမ်းများတယ်၊အရာရာကိုဖြေရှင်းနိုင်တယ်၊ သူတို့မှာအခက်အခဲတော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ ထင်လိုက်ရင်မှားသွားပါလိမ့်မယ်။
ဂျက်မားလို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ အလီဘာဘာလုပ်ငန်းစုကို တည်ထောင်ခဲ့တဲ့၊ တရုတ်ပြည်မှာ အင်တာနက်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းနဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ တရုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။
အောင်မြင်သူတွေမှာ သူတပါးနဲ့ မတူ၊ ထူးခြားတဲ့ ဘ၀ရှုမြင်ပုံတွေနဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။
ဂျက်မားရဲ့ လူငယ်ဘ၀ဖြတ်သန်းခဲ့မှုမှာ ထူးခြားတဲ့ စရိုက်လက္ခဏာတွေက နောင်တချိန် သူရဲ့ အောင်မြင်မှု လမ်းကြောင်းမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
(၁) အလုပ်တစ်ခုကို စွဲစွဲမြဲမြဲလုပ်တတ်ခြင်း
ဂျက်မားဟာ အင်္ဂလိပ်စာတတ်မြောက်လာဖို့ကို ၉နှစ်တိုင်တိုင် ကြိုးစားသင်ယူလေ့လာခဲ့ပါတယ်။
မနက် ၅နာရီမထိုးခင် အိပ်ယာထ၊ တိုးရစ်တွေရှိနေတဲ့ ဟိုတယ်တွေကိုသွား၊ သူတို့ကိုလည်ပတ်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်ပို့၊ လိုက်ရှင်းပြပေးခဲ့တယ်။
ရလာဒ်အနေနဲ့ ပြန်ရတာက တိုးရစ်တွေက အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ စကားပြောကို အလကားပြန်သင်ပေးခဲ့ကြတာပါပဲ။
အဲဒီမှာ ထူးခြားတဲ့အချက်က ရာသီဥတု ဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေပါစေ သူက မပျက်မကွက်ပဲ နေ့တိုင်းသွားနေခဲ့တာပါ။
(၂) အပေးအယူ သဘောတရားကို နားလည်ခြင်း
ဂျက်မားက လိုက်ပို့ပြီှးရှင်းပြရတာတွေအတွက် စရိတ်မတောင်းခံခဲ့ဘူး။
သူသာ တောင်းခံခဲ့မယ်ဆိုရင် သူ့ရဲ့ လိုလားမှုဖြစ်တဲ့ နေ့တိုင်းအင်္ဂလိပ်စာနဲ့ ထိတွေ့မှု ရဖို့ဆိုတာ ဘယ်လွယ်နိုင်ပါမလည်း။
တစ်စုံတစ်ခုကိုလိုချင်ရင် ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုနားလည်သလို ကိုယ်လိုချင်တဲ့အရာအတွက် ဘယ်အရာကို ပေးဆပ်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်း သိနေခဲ့ပါသေးတယ်။
(၃) မိမိစိတ်ဝင်စားရာကို လေ့လာသင်ယူရာတွင် အရှက်၊ အကြောက်တရားကို ဘေးဖယ်ထားနိုင်ခြင်း
ဂျက်မားဒီလိုမျိုးတိုးရစ်တွေကိုလိုက်ပို့ရာမှာ ယုံကြည်လက်ခံတဲ့သူတွေရှိသလို မယုံကြည်ပဲ ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ လူတွေနဲ့လည်း ကြုံတွေ့ခဲ့ရမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဂျက်မားဟာ သူစိတ်ဝင်စားရာ ဘာသာရပ်ကို လေ့လာရာမှာ အရှက်တရား၊
အကြောက်တရားတွေကို ဘေးဖယ်ထားပြီး ကိုယ်လိုချင်ရာ၊ လိုအပ်ရာကိုပဲ အာရုံစူးစိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာပါ။
(၄) ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းခြင်း
ဂျက်မားရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမှုတွေကြောင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်ယူရာမှာ ပိုမိုအဆင်ပြေခဲ့သလို
အသက်(၂၀) ကျော်အရွယ်မှာပဲ နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ သွားရောက်ဖို့ အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ် ရရှိခဲ့ပါတယ်။
တစ်ကယ်လို့ သူသာ ဒီအခွင့်အရေးကို မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရင် နောင်တစ်ချိန်မှာ အဝေးပြေးလမ်းမကြီး ဖောက်လုပ်ဖို့ ကိစ္စ အကူအညီတောင်းခြင်းခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာ
လက်ခံဖို့ ဆုံးဖြတ်ရမှာ တွန့်ဆုတ်မှုတွေ ရှိရင် ရှိနေခဲ့မှာပါ။သူ့ရဲ့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး ကောင်းမှုတွေဟာ နောင်တချိန် တက္ကသိုလ်ပညာရေး
ဆုံးခန်းတိုင်ရောက်ဖို့နေရာမှာ အထောက်အပံ့ဖြစ်ခဲ့သလို စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ရာမှာလည်း တပည့်တွေစီကနေ အထောက်အကူတွေ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
Recommended For You >>> ချမ်းသာချင်ရင် စွန့်လွှတ်ရမယ့် အလေ့အကျင့်ဆိုးများ
(၅) အရှုံးနှင့် ရင်ဆိုင်ရသော်လည်း စိတ်ဓာတ်မကျခြင်း
ဂျက်မားဟာ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရဖို့ အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး စာမေးပွဲမှာ သချာင်္ (၁)မှတ်ပဲ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ မဆုတ်မနစ် ကြိုးပမ်းမှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် တတိယအကြိမ် ဖြေဆိုရာမှာ အောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့ ကျရှုံးမှုကို စိတ်ဓာတ်မကျ၊ နောက်လှည့်မပြန်ပဲ
ကြိုးပမ်းတတ်တဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေက နောင်တချိန် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရာမှာ အခက်အခဲတွေ တွေ့ကြုံလာခဲ့ရာမှာလည်း ခိုင်မာတဲ့ စိတ်ဓာတ်အဖြစ်နဲ့ အောင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။
(၆) အားနည်းချက်ကို ဖြည့်စည်းတတ်ခြင်း
ဂျက်မားဟာ တရုတ်သိုင်းပညာ ဖြစ်တဲ့ ထိုက်ချိသိုင်းကိုလည်း ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်တတ်မြောက်ပါသေးတယ်။
သူ့ကို ရန်စအနိုင်ကျင့်မှုတွေကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အနေအထား၊ ပြိုင်ဖက်တွေကို အနိုင်တိုက်နိုင်တဲ့ အနေအထားတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ သူဟာ လူကောင်သေးပါတယ်။
အဲဒီလိုအားနည်းချက်တစ်ခုကို ထိုက်ချိသိုင်းတတ်မြောက်မှုနဲ့ ဖြည့်စည်း ကာကွယ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
(၇) အရည်အချင်းတစ်ရပ်ကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာ အသုံးချနိုင်ခြင်း
ဂျက်မားဟာ အရည်အချင်းတွေ အများကြီးနဲ့ ပြည့်စုံနေတဲ့သူမျိုးတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ သူ့အရည်အချင်းဖြစ်တဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို ကျွမ်းကျင်စွာတတ်မြောက်ခြင်းဆိုတာကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် နည်းလမ်းမျိုးစုံနဲ့ အသုံးချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
တက္ကသိုလ်မှာ ဆရာဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကိုယ်ပိုင်အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းကျောင်း ဖွင့်နိုင်ခဲ့တယ်။
အဲဒီလိုပဲ ဒီအရည်အချင်းကို အသုံးချပြီး ဘာသာပြန်လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီထောင်ရာက စတင်ပြီး စီးပွားရေးလောကထဲကို ၀င်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ နောင်တချိန်မှာလည်း
ဒီအရည်အချင်းကြောင့် အမေရိကသွားဖို့အခွင့်အလမ်းပေါ်လာခဲ့သလို အင်တာနက်ဆိုတာကို စတင်ထိတွေ့ခွင့်ရရှိလာခဲ့တာပါ။
(၈) ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိခြင်း
သူဟာ ပညာရေးမှာ ဖြစ်စေ၊ စီးပွားရေးမှာ ဖြစ်စေ အလွယ်တကူနဲ့ အောင်မြင်လာခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။
လူတိုင်း ကြုံရသလိုပဲ အခက်အခဲတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် သူရဲ့ အရည်အချင်းတစ်ရပ်က ကိုယ့်ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု အပြည့်ရှိခြင်းပါ။
မအောင်မြင်ဘူး… အိုကေ… ထပ်ကြိုးစားမယ်… တစ်ချိန်မှာ အောင်မြင်လာမယ်ဆိုတဲ့ လူမျိုးပါ ဂျက်မားရဲ့ ငယ်ဘ၀ကို လေ့လာကြည့်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာ သူတပါးတွေထက် ထူးချွန်လွန်း၊
ထက်မြက်လွန်းတဲ့ လူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်လူတွေလိုပဲ အခက်အခဲပေါင်းစုံနဲ့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ။
သာမန်လူတွေနဲ့ ကွာခြားသွားပြီး သူ့ကို အောင်မြင်စေခဲ့တဲ့ အချက်ကတော့ အခက်အခဲတွေ ကြုံတွေ့လာရင် လက်မလျှော့တဲ့ စိတ်ဓာတ်၊ ကိစ္စတစ်ခုကို အာရုံစူးစိုက်လေ့လာမှု၊
ကိုယ်ကိုကိုယ် အပြည့်အ၀ ယုံကြည်မှုတွေပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ကော…. ကိုယ်ဝါသနာပါ၊ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာတစ်ခုကို ၉နှစ်လုံးလုံး တစ်ရက် မပျက်ပဲ အာရုံစူးစိုက်
လေ့လာနေခဲ့မယ်ဆိုရင်၊ အကြိမ်ကြိမ်ကျရှုံးမှုတွေကို အတွေ့အကြုံသင်ခန်းစာအဖြစ်ယူပြီး မဆုတ်မနစ်နဲ့ အောင်မြင်အောင် ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် …မအောင်မြင်မှုပဲ ရှိပါဦးမလားခင်ဗျ။
ဤလင့်https://bit.ly/2EbNTuO မှာ ဘာသာရပ်ပေါင်းစုံ သင်ပေးသော ဆရာ၊ ဆရာမများ ကို အခမဲ့ ဝင်ရောက်ရျာဖွေနိုင်ပါသည်။
"ဂကျြမား၏ လူငယျဘဝအား လလေ့ာခွငျး"
ဂကျြမားလို့ဆိုလိုကျတာနဲ့ အလီဘာဘာလုပျငနျးစုကို တညျထောငျခဲ့တဲ့၊ တရုတျပွညျမှာ အငျတာနကျပစ်စညျးရောငျးဝယျရေးလုပျငနျးနဲ့ အောငျမွငျနတေဲ့ တရုတျစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျတဈယောကျဆိုတာ လူတိုငျးသိကွမှာပါ။
အောငျမွငျသူတှမှော သူတပါးနဲ့ မတူ၊ ထူးခွားတဲ့ ဘဝရှုမွငျပုံတှနေဲ့ စရိုကျလက်ခဏာတှေ ရှိတတျကွပါတယျ။
ဂကျြမားရဲ့ လူငယျဘဝဖွတျသနျးခဲ့မှုမှာ ထူးခွားတဲ့ စရိုကျလက်ခဏာတှကေ နောငျတခြိနျ သူရဲ့ အောငျမွငျမှု လမျးကွောငျးမှာ အထောကျအပံ့ဖွဈစခေဲ့ပါတယျ။
(၁) အလုပျတဈခုကို စှဲစှဲမွဲမွဲလုပျတတျခွငျး
ဂကျြမားဟာ အင်ျဂလိပျစာတတျမွောကျလာဖို့ကို ၉နှဈတိုငျတိုငျ ကွိုးစားသငျယူလလေ့ာခဲ့ပါတယျ။
မနကျ ၅နာရီမထိုးခငျ အိပျယာထ၊ တိုးရဈတှရှေိနတေဲ့ ဟိုတယျတှကေိုသှား၊ သူတို့ကိုလညျပတျတဲ့နရောတှကေို လိုကျပို့၊ လိုကျရှငျးပွပေးခဲ့တယျ။
ရလာဒျအနနေဲ့ ပွနျရတာက တိုးရဈတှကေ အင်ျဂလိပျစာနဲ့ စကားပွောကို အလကားပွနျသငျပေးခဲ့ကွတာပါပဲ။
အဲဒီမှာ ထူးခွားတဲ့အခကျြက ရာသီဥတု ဘယျလိုအခွအေနရှေိနပေါစေ သူက မပကျြမကှကျပဲ နတေို့ငျးသှားနခေဲ့တာပါ။
(၂) အပေးအယူ သဘောတရားကို နားလညျခွငျး
ဂကျြမားက လိုကျပို့ပွီှးရှငျးပွရတာတှအေတှကျ စရိတျမတောငျးခံခဲ့ဘူး။
သူသာ တောငျးခံခဲ့မယျဆိုရငျ သူ့ရဲ့ လိုလားမှုဖွဈတဲ့ နတေို့ငျးအင်ျဂလိပျစာနဲ့ ထိတှမှေု့ ရဖို့ဆိုတာ ဘယျလှယျနိုငျပါမလညျး။
တဈစုံတဈခုကိုလိုခငျြရငျ ပေးဆပျရမယျဆိုတဲ့ သဘောတရားကိုနားလညျသလို ကိုယျလိုခငျြတဲ့အရာအတှကျ ဘယျအရာကို ပေးဆပျရမယျဆိုတာကိုလညျး သိနခေဲ့ပါသေးတယျ။
(၃) မိမိစိတျဝငျစားရာကို လလေ့ာသငျယူရာတှငျ အရှကျ၊ အကွောကျတရားကို ဘေးဖယျထားနိုငျခွငျး
ဂကျြမားဒီလိုမြိုးတိုးရဈတှကေိုလိုကျပို့ရာမှာ ယုံကွညျလကျခံတဲ့သူတှရှေိသလို မယုံကွညျပဲ ငွငျးပယျခဲ့တဲ့ လူတှနေဲ့လညျး ကွုံတှခေဲ့ရမှာပါ။ ဒါပမေယျ့ ဂကျြမားဟာ သူစိတျဝငျစားရာ ဘာသာရပျကို လလေ့ာရာမှာ အရှကျတရား၊
အကွောကျတရားတှကေို ဘေးဖယျထားပွီး ကိုယျလိုခငျြရာ၊ လိုအပျရာကိုပဲ အာရုံစူးစိုကျထားနိုငျခဲ့တာပါ။
(၄) ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးခွငျး
ဂကျြမားရဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးမှုတှကွေောငျ့ အင်ျဂလိပျစာ သငျယူရာမှာ ပိုမိုအဆငျပွခေဲ့သလို
အသကျ(၂၀) ကြျောအရှယျမှာပဲ နိုငျငံရပျခွားသို့ သှားရောကျဖို့ အခှငျ့အလမျးတဈရပျ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
တဈကယျလို့ သူသာ ဒီအခှငျ့အရေးကို မရရှိခဲ့ဘူးဆိုရငျ နောငျတဈခြိနျမှာ အဝေးပွေးလမျးမကွီး ဖောကျလုပျဖို့ ကိစ်စ အကူအညီတောငျးခွငျးခံခဲ့ရတဲ့အခြိနျမှာ
လကျခံဖို့ ဆုံးဖွတျရမှာ တှနျ့ဆုတျမှုတှေ ရှိရငျ ရှိနခေဲ့မှာပါ။သူ့ရဲ့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေး ကောငျးမှုတှဟော နောငျတခြိနျ တက်ကသိုလျပညာရေး
ဆုံးခနျးတိုငျရောကျဖို့နရောမှာ အထောကျအပံ့ဖွဈခဲ့သလို စီးပှားရေးလုပျငနျးတှေ လုပျကိုငျရာမှာလညျး တပညျ့တှစေီကနေ အထောကျအကူတှေ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
(၅) အရှုံးနှငျ့ ရငျဆိုငျရသျောလညျး စိတျဓာတျမကခြွငျး
ဂကျြမားဟာ တက်ကသိုလျဝငျခှငျ့ရဖို့ အားသှနျခှနျစိုကျ ကွိုးပမျးအားထုတျခဲ့ရပါတယျ။ သူ့ရဲ့ ပထမဆုံး စာမေးပှဲမှာ သခြာင်္ (၁)မှတျပဲ ရရှိခဲ့ပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ မဆုတျမနဈ ကွိုးပမျးမှုတှေ ရှိခဲ့တဲ့အတှကျ တတိယအကွိမျ ဖွဆေိုရာမှာ အောငျမွငျခဲ့ပါတယျ။ သူရဲ့ ကရြှုံးမှုကို စိတျဓာတျမကြ၊ နောကျလှညျ့မပွနျပဲ
ကွိုးပမျးတတျတဲ့ စိတျဓာတျတှကေ နောငျတခြိနျ စီးပှားရေးလုပျကိုငျရာမှာ အခကျအခဲတှေ တှကွေုံ့လာခဲ့ရာမှာလညျး ခိုငျမာတဲ့ စိတျဓာတျအဖွဈနဲ့ အောငျမွငျစခေဲ့ပါတယျ။
(၆) အားနညျးခကျြကို ဖွညျ့စညျးတတျခွငျး
ဂကျြမားဟာ တရုတျသိုငျးပညာ ဖွဈတဲ့ ထိုကျခြိသိုငျးကိုလညျး ကြှမျးကြှမျးကငျြကငျြတတျမွောကျပါသေးတယျ။
သူ့ကို ရနျစအနိုငျကငျြ့မှုတှကေို တှနျးလှနျနိုငျတဲ့ အနအေထား၊ ပွိုငျဖကျတှကေို အနိုငျတိုကျနိုငျတဲ့ အနအေထားတှရှေိခဲ့ပါတယျ။ သူဟာ လူကောငျသေးပါတယျ။
အဲဒီလိုအားနညျးခကျြတဈခုကို ထိုကျခြိသိုငျးတတျမွောကျမှုနဲ့ ဖွညျ့စညျး ကာကှယျထားနိုငျခဲ့ပါတယျ။
(၇) အရညျအခငျြးတဈရပျကို ကြှမျးကငျြပိုငျနိုငျစှာ အသုံးခနြိုငျခွငျး
ဂကျြမားဟာ အရညျအခငျြးတှေ အမြားကွီးနဲ့ ပွညျ့စုံနတေဲ့သူမြိုးတော့ မဟုတျပါဘူး။
ဒါပမေဲ့ သူ့အရညျအခငျြးဖွဈတဲ့ အင်ျဂလိပျစာကို ကြှမျးကငျြစှာတတျမွောကျခွငျးဆိုတာကို အသကျမှေးဝမျးကြောငျးအဖွဈ နညျးလမျးမြိုးစုံနဲ့ အသုံးခနြိုငျခဲ့ပါတယျ။
တက်ကသိုလျမှာ ဆရာဖွဈခဲ့တယျ။ ကိုယျပိုငျအင်ျဂလိပျစာ သငျတနျးကြောငျး ဖှငျ့နိုငျခဲ့တယျ။
အဲဒီလိုပဲ ဒီအရညျအခငျြးကို အသုံးခပြွီး ဘာသာပွနျလုပျငနျးကုမ်ပဏီထောငျရာက စတငျပွီး စီးပှားရေးလောကထဲကို ဝငျရောကျလာနိုငျခဲ့ပါတယျ။ နောငျတခြိနျမှာလညျး
ဒီအရညျအခငျြးကွောငျ့ အမရေိကသှားဖို့အခှငျ့အလမျးပျေါလာခဲ့သလို အငျတာနကျဆိုတာကို စတငျထိတှခှေ့ငျ့ရရှိလာခဲ့တာပါ။
(၈) ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိခွငျး
သူဟာ ပညာရေးမှာ ဖွဈစေ၊ စီးပှားရေးမှာ ဖွဈစေ အလှယျတကူနဲ့ အောငျမွငျလာခဲ့တာတော့ မဟုတျပါဘူး။
လူတိုငျး ကွုံရသလိုပဲ အခကျအခဲတှနေဲ့ ရငျဆိုငျရခဲ့တယျ။ ဒါပမေယျ့ သူရဲ့ အရညျအခငျြးတဈရပျက ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှု အပွညျ့ရှိခွငျးပါ။
မအောငျမွငျဘူး… အိုကေ… ထပျကွိုးစားမယျ… တဈခြိနျမှာ အောငျမွငျလာမယျဆိုတဲ့ လူမြိုးပါ ဂကျြမားရဲ့ ငယျဘဝကို လလေ့ာကွညျ့တဲ့အခြိနျမှာ သူဟာ သူတပါးတှထေကျ ထူးခြှနျလှနျး၊
ထကျမွကျလှနျးတဲ့ လူတော့ မဟုတျပါဘူး။ သာမနျလူတှလေိုပဲ အခကျအခဲပေါငျးစုံနဲ့ ကွုံတှခေဲ့ရတဲ့ လူတဈယောကျပါ။
သာမနျလူတှနေဲ့ ကှာခွားသှားပွီး သူ့ကို အောငျမွငျစခေဲ့တဲ့ အခကျြကတော့ အခကျအခဲတှေ ကွုံတှလေ့ာရငျ လကျမလြှော့တဲ့ စိတျဓာတျ၊ ကိစ်စတဈခုကို အာရုံစူးစိုကျလလေ့ာမှု၊
ကိုယျကိုကိုယျ အပွညျ့အ၀ ယုံကွညျမှုတှပေါပဲ။ ကြှနျတျောတို့ဆိုရငျကော…. ကိုယျဝါသနာပါ၊ စိတျဝငျစားတဲ့ အရာတဈခုကို ၉နှဈလုံးလုံး တဈရကျ မပကျြပဲ အာရုံစူးစိုကျ
လလေ့ာနခေဲ့မယျဆိုရငျ၊ အကွိမျကွိမျကရြှုံးမှုတှကေို အတှအေ့ကွုံသငျခနျးစာအဖွဈယူပွီး မဆုတျမနဈနဲ့ အောငျမွငျအောငျ ကွိုးစားမယျဆိုရငျ …မအောငျမွငျမှုပဲ ရှိပါဦးမလားခငျဗြ။
ဤလငျ့ https://bit.ly/2EbNTuO မှာ ဘာသာရပျပေါငျးစုံ သငျပေးသော ဆရာ၊ ဆရာမမြား ကို အခမဲ့ ဝငျရောကျရြာဖှနေိုငျပါသညျ။
စိတျဓာတျခိုငျမာခွငျးက သငျ့ကိုပိုပွီး ကောငျးမှနျတဲ့ပနျးတိုငျနဲ့၊ ပိုပွီးကွီးမားတဲ့ပနျးတိုငျကို ရောကျရှိစနေိုငျပါတယျ။
"လူငယျတှေ အနနေဲ့ခတျေသဈရဲ့ စိနျချေါမှုတှအေတှကျ အသငျ့ဖွဈနစေဖေို့"
ဒီနခေ့တျေရဲ့ သရုပျသကနျတဈခုကို ပွောပါဆိုရငျ ‘Hyper-competition’ ယှဉျပွိုငျမှု မြားလာတာပဲ။